Daawo Sawiro: London oo baroordiiq lagu qabtay qaraxii Zoope
Kulanka baroordiiq ah oo ka dhacay magaalada London ayaa dhaqaalo loogu arruuriyay dadkii ku geeriyooday ama ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay caasimadda Muqdisha, taariikhdu markii ay aheyd 14kii October 2017ka.
Kulanka Tacsida ayaa waxaa khadka taleefoonka nagala qeyb qaatay Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisha Thaabit Cabdi Maxamed. Waxa ay mas’uuliyiintu dhiiri-galiyeen shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada oo qeyb weyn ka qaadan kara sugida amniga iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa Kulanka Tacsida qeyb weyn ka ahaa bahda fanka & suugaanta, bahda warbaahinta, bahda isboortiga, aqoon-yahano, wax-garad, ururada haweenka iyo dhallinyarada, siyaasiyiin iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan dhammaanteen Illaahay ka baryaynaa inuu u naxariisto intii ku geeriyootay qaraxyada, caafimaad buuxana siiyo intii ku dhaawacantay,.
Noloshii qadhaadheyd Part 9